Kuziva sei kana mwana apambwa | Bezzia
Maria Jose Roldan | 12/03/2021 22:00 | Dzidzisai vana
Hakuna mubereki anofarira kubvuma kuti mwana wake akashatiswa uye haasi kuwana dzidzo kwayo. Nekudaro, iyi mhando yemafambiro yakajairika zvakanyanya kupfuura iwe zvaungafunge uye iri muchiedza chezuva.
Naizvozvo, zvakakosha kuti ukwanise kugadzirisa dambudziko iri nenguva sezvo zvikasadaro vanogona kukuvadzwa kana zvasvika pakuva munhu mukuru. Vabereki vanofanira kuva nematurusi anodiwa ekugadzirisa hunhu hwakadai hunokuvadza hwevana uye kudzivirira vana vavo kubva mukushatiswa.
1 Maitiro ekuudza kana mwana apambwa
2 Maitiro ekugadzirisa maitiro emwana akashatiswa
Kune akati wandei ezviratidzo zvinoratidza kuti mwana aparadzwa uye kuti maitiro ayo haasi echokwadi:
Kuti mwana ashatirwe nezvese uye kuita hasha zvakajairika kusvika pamakore matatu kana mana ekuberekwa. Kana mushure mezera iro, mwana akaramba achishushikana, zvinogona kuratidza kuti mwana akapambwa. Pazera rakadai, hasha nehasha zvinoshandiswa kuitira kudzora vabereki uye kuwana zvavanoda.
Mwana akashatiswa haakoshese zvaainazvo uye ane zvido nguva dzose. Hapana chinhu chinomuzadzisa kana kumugutsa uye iye ari kutadza kutora kwete semhinduro.
Kushaikwa kwedzidzo uye hunhu ndechimwe chezviratidzo zvakajeka zvekuti mwana akapambwa. Anotaura kune vamwe nenzira yekusaremekedza zvachose uye nekuzvidza zvachose.
Kana mwana akashatiswa, zvakajairika kuti iye arege kuteerera chero rudzi rweodha kubva kuvabereki. Haakwanise kutambira mitemo yakamisirwa pamba uye anoita zvaanoda.
Maitiro ekugadzirisa maitiro emwana akashatiswa
Chinhu chekutanga vabereki chavanofanira kuita kubvuma kuti mwana wavo akashatiswa uye kuti dzidzo yakagamuchirwa yanga isina kukwana. Kubva pano zvakakosha kugadzirisa maitiro akadaro nekutevera nhevedzano yenhungamiro dzinobatsira mwana kuti ave nehunhu hwakakodzera:
Izvo zvakakosha kuti umire wakasimba mukutarisana nemitemo yakatemwa uye usazopa kumwana.
Mudiki anofanira kunge aine akateedzana emabasa anofanirwa kuzadzikiswa. Vabereki havagone kumubatsira uye mudiki ane chikwereti kune iye anozvizadzisa.
Kutaurirana uye kutaurirana kwakanaka kiyi yekuratidza kuremekedza vanhu vakuru. Dambudziko rine vana nhasi nderekuti havatombotauri kuvabereki vavo, kukonzera hunhu husina kukodzera.
Vabereki vanofanira kuva muenzaniso kuvana vavo uye iva nehunhu hwakakodzera pamberi pavo.
Zvakanaka kukorokotedza mwana kana aita chinhu nemazvo uye kuti zvakanaka. Kusimbisa maitiro akadaro kunobatsira mwana kuti akwanise kuremekedza tsika dzakasiyana dzakamisikidzwa nevabereki.
Muchidimbu, Kurera mwana harisi basa riri nyore kana rakareruka uye rinoda nguva uye moyo murefu wakawanda. Pakutanga zvinogona kuomera mwana kuti anzwisise tsika dzakadai, asi nekusimba anozopedzisira adzidza tsika dzakateedzana dzinomubatsira kuti maitiro ake ave akanaka uye akakodzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Dzidzisai vana » Maitiro ekuudza kana mwana apambwa
Mabhuku mashanu pamusoro pehupenyu hwakagadzikana hwaunofanira kuverenga
Izvi zvekudya zvinokanganisa kufamba kwako kweropa